Yebo, kwenzeka. Futhi emandleni akho ukulungisa umntwana futhi uhlabe ngendlela efanele, ngakho-ke ukukhangisa okunjalo kwakulula futhi ngokushesha ngangokunokwenzeka kwesokunxele.
Isibhedlela siyinto evamile futhi iphuthumayo. Futhi uma kwenzeka okwesibili kungekho ukulungiswa okukhethekile futhi kuyadingeka ukuba senze ngokushesha ngenxa yokulondoloza impilo noma impilo yesiguli esincane, khona-ke ekutholeni kungenzeka ukuthi "ukulungiswa" okulungile. Kuze kube yilapho umntwana eneminyaka eyisithupha ubudala, ngomthetho umama kufanele avunyelwe ukuba asondele kuye esibhedlela. Ngokwenzayo, kwenzeka ngezindlela eziningi. Ukugula, ikakhulukazi ngesidingo sokuhlukaniswa nabathandekayo, kungenye ukucindezeleka kwengane. Indlela yokunciphisa le nkathi enzima yokuphila kwakhe?
Indlela oya ngayo esibhedlela "inganekwane" ikakhulukazi incike ekupheleni kwengane. Ingane yasenkulisa, okokuqala, idinga ukuqinisekiswa futhi iqinisekiswe ukuthi ukulaliswa esibhedlela akuhlobene nokungalaleli noma ukungathandi kwakhe ngabazali bakhe. Ikakhulukazi kunzima ukubekezelela ukuhlala esibhedlela yizingane ezineminyaka engu-3-4 ubudala, lapho umama nobaba kubonakala sengathi yibo kuphela abantu abanothando emhlabeni wonke, lapho ukwesaba kukhula ngokufudumele, kuhlanganise nokwesaba ukufa. Izingane zihlushwa umcabango wokuthi kuzodingeka zikhuthazelele ukuhlupheka nobuhlungu, ziqinisekile ukuthi zihlala zingabangane bazo zonke izinqubo zokwelapha. Sitshele ukuthi lokhu akuyona into njalo. Ungaphinda usho izikhathi ezimbalwa ezimnandi: ithuba lokudlala nezinye izingane noma udle ngqo embhedeni.
Umntwana omdala kufanele anikezwe ulwazi olubaluleke kakhulu mayelana nokuthi kungani uzobe esibhedlela futhi kuzokwenzekani esibhedlela. Ingane kufanele iqonde: inkathazo enjengoba isibhedlela siyadingeka ukuze kuzuze yena, futhi ukuthi uzokulandela ngokucophelela kanjani izincomo zodokotela nabahlengikazi, ngokuvamile kuxhomeke ekutheni isikhashana esibhedlela sizohlala isikhathi esingakanani. Mchaze imithetho yokuziphatha kule sikhungo, ukusikisela ukuthatha izinto ezingenza impilo yakhe ibe ngcono ewadi: i-albhamu namapensela, izinsizakalo, izincwadi, amagajethi nomculo nemidlalo.
Bazali, endleleni yokuphuma!
Ukusuka kwesimo sengqondo somama ngezindlela eziningi kuncike enganeni. Zama ukuzigcina uphendulele futhi uhlale uphelile, ngoba esimweni esithintekayo, sivame ukwenza lokho esiyikhohla ngakho ngakho, futhi ngeke sihlole ngokwanele ulwazi olubalulekile odokotela ababikayo. Kungakhathaliseki ukuthi uyabhekana kangakanani, khumbula ukuthi into ebaluleke kakhulu manje ingumntwana wengane. Ungenzi ingane esibhedlela ibe yidrama yendawo yonke, "ungazitholi", uhlale kude nezihlobo ezingenakuqiniswa ngokomzwelo. Ukubeka ukuthi isibhedlela siyingozi, ubuhlungu nokwesaba, esikhundleni senye: lokhu yindawo abasiza ngayo, ukuletha ukubuyiswa okusondelene.
Zama ukwakha isimo sengqondo esihle kunodokotela nabasebenzi bezokwelapha. Ingane ingafunda omdala omdala "Udokotela u-Aybolit", uthenge isethi yokudlala, ukuze azame kule ndima, ingane ekhulile - tshela izindaba zeqiniso ezimangalisweni ezenziwa ngabantu odokotela ezivela kuNkulunkulu, okuyinto empeleni ziningi. Lokhu kuzonikeza ukuthula nokuqiniseka ukuthi konke kuyoba kuhle. Hlonipha odokotela: musa ukuphikisana nezinyathelo zabo nengane, bahloniphe ekukhulumeni nabo. Kodwa-ke, lokhu akusho ukuthi ungalahlekelwa ukuqapha: amaphutha ezempilo ayenzeka, futhi awavamile. Ngakho-ke unganqikazi ukubuza imibuzo, unelungelo lokuthola noma yiluphi ulwazi mayelana nokwelashwa kwengane, ukwazi ukuthi yini futhi kungani emisiwe, ukufuna ukuchazwa kwemigomo yezokwelapha.
Bhala phansi konke okungahle kwenzeke: amagama kanye noxhumana nabo odokotela, amagama ezidakamizwa kanye nezikhathi zabo zokungeniswa, isimiso nsuku zonke esibhedlela, imikhiqizo evunyelwe futhi enqatshelwe, njll. Lokhu konke kuzosisiza ukuba sihlele ulwazi futhi, okungenani kancane, sihluke inqubo, futhi uma kwenzeka singabazeki ukulungiswa kokwelashwa ukuthola ukubonisana kokubhala kusuka kwesinye isazi.
Kungcono nini ukutshela isiguli esincane ukuthi kufanele abuye esibhedlela? Kunconywa izinsuku ezimbalwa - ingane idinga ukulungisa kokubili ngokwengqondo nangokomzimba. Akukuhle ukuletha ingane kudokotela njengokungathi uhlolwe njalo, bese ubhalisa ngokushesha esibhedlela - lokhu kuyamthusa. Kodwa ukwelula ukuhlupheka ngokuhlukana okuzayo kwamasonto amabili nakho akufanele. Zama ukungabonisi indodana yakho noma indodakazi yakho ukuthi uzizwa kanjani kabi, ngokuphambene nalokho, bheka konke okulungile. Ingane yakho idinga ukwesekwa kwakho!
Yini ingane eyidingayo esibhedlela?
Ubuncane bokuhlanzeka: i-toothbrush ne-paste, isepha, iphepha lokungcebeleka; (uhlu olugcwele lungacaciswa kusuka kubasebenzi beziko elithile);
izingubo ezihlanzekile (uzothatha izingubo ezingcolile);
ukudla okuzenzela (Yebo, uma kuvunyelwe);
ifoni ephathekayo kanye neshaja ukuze ingane ihlale ixhunyiwe.
Isimiso esiyinhloko - isiguli esincane kufanele sibe nakho konke okudingayo, kodwa akukho lutho olungathandeki.
Kusuka ku-receipt ukuze kukhishwe
Ukuthi ingane ishintsha kanjani ngokushesha esibhedlela kuncike ekutheni isisindo sezici: ukuqina kwesifo kanye nokuphathwa kwemithi, ubudala bakhe, ubumnene, izici zomuntu ngamunye, futhi ekugcineni, kusukela enkampanini (nabangani futhi ujabule!). Njengomthetho, emva kwezinsuku ezingu-3-5 isiguli esincane "kancane kancane", sijwayele isimo esisha. Ngokudabukisayo, uhlangabezana nezikhathi ezinzima kakhulu ngesikhathi sokuvakashela abazali bakhe: ukubonakala kwesithunywa esivela endlini ngokushesha kukukhumbuza ukuthi kuhle kangakanani nokuthi ufuna ukubuyela kanjani ngokushesha ngangokunokwenzeka. Ngakho-ke, ukuvakashelwa kwabazali kuvame ukuqeda izinyembezi zezingane kanye nabahlaziyi. Noma kunjalo, lokhu akusho ukuthi ukuvakashelwa kufanele kunqunywe okungenani. Phela, kubaba noyise, izingane zanoma yimuphi ubudala zibona umthombo wokuzethemba nokuthula.
Xoxa kuphela izindaba ezinhle, ngokunye ongakwenza futhi ulinde, cela ingane ukuthi kwenzekani kuye esibhedlela, futhi ngokugcizelela kokuhle: funda incwadi entsha, wenze ubungane nomunye umuntu, ufunde ukuthi ungayiphatha kanjani iphazili, njll Kumdumise ngisho ihlupha njengengxenye ye-porridge, idliwe kuze kube sekupheleni, noma ukuziphatha ngesibindi ekamelweni lokunakekelwa.
Yenza izinhlelo ngekusasa, ukuthi uzokwenzenjani uma ebuya ekhaya, lapho uhamba khona, lapho uhambela ukuvakashela khona ... Kubalulekile ukuqinisekisa ukuthi ingane ingakhathazeki esibhedlela: ngisho nemidlalo oyikhonzile nemisebenzi, ephindaphindiwe nsuku zonke , ungaba nesithukuthezi - udinga ukunakekela ushintsho lwazo. Ngendlela, esesibhedlela lapho kunesikhathi esiningi samahhala, ingane ingaba nethalente langempela: umuntu uthanda ukucweba noma i-macrame, othile uqala ukudweba, ukudweba kusuka epulasitiki noma ukubhala izinkondlo!
Ngokuqondene nokwelashwa kwangempela, impumelelo yayo incike kakhulu ekufundiseni kwesiguli esincane kanye nonina. Zama ukugcina ngokucophelela isimiso sansuku zonke kanye neminye imithetho yesibhedlela, ungayinaki iseluleko sabasebenzi bezokwelapha. Ungazihawukeli wena nomntanakho, kodwa ungafuni ukuthi kwenzeke kuye. Ngokuvamile, uyesaba izinqubo ezingathandeki (imijovo, amabhandeki, ama-droppers), ngisho noma ezinye izingane ziziphatha kangcono, ungammangazi! Ngokukhethekile ungesabi futhi ukhohlise, "Ungalili, bese-ke uzokhipha amajova amaningi", "Uzoziphatha ngale ndlela - ngeke neze ikubhalele esibhedlela", "Bheka: akekho okhonayo, nguwe kuphela", "Akukona ukuthi ulungise izilinganiso "(futhi ngalesi sikhathi udokotela wenza umjovo ngokuzumayo) - lezi zinkulumo ezingavunyelwe kanye namasu.
Okokugcina, umzuzwana omude okulindelwe "wenkululeko" - umntwana wakho usekhaya futhi! Lena injabulo enkulu. Kodwa-ke, eminye yemiphumela yokuba esibhedlela - ingqondo yengqondo - ingase iphele maduzane. Ukuhlupheka, ingane ingathukuthela, ibe nobudlova noma ivalwe ngaphakathi kwayo, noma ifutheke, ingabe ingenangqondo futhi ingakhathazeki. Ngeke njalo futhi "kambek" ebuntwaneni - lokhu ngokuvamile kwenzeka nezingane 3-4 ubudala. Baphinde bacele ukuphatha, benqabe ukuzigqoka, bangakwazi ngisho nokubhala emasenties - lokhu kugxila kwengqondo, okungukuthi, ukubuyela esigabeni esedlule sokuthuthukiswa. Ukuhlala kanje, ingane ibonakala ivikelekile: umama wengane ngeke esavunyelwe ukubeka ingane esibhedlela.
Ukuhlala ezindongeni zesibhedlela kuphela kungabangela ingane yengqondo. Futhi akukhathaleki ukuthi uneminyaka emingaki: ngisho nezinsana eziphoqeleka ukuba zichithe isikhathi esithile esibhedlela ngaphandle komama ziyikhumbule, futhi ngemva kwalokho ukuhlukunyezwa ngokomzwelo okuxoshwe emkhakheni wokungazi lutho kudala izinkinga eziningi, kudala ukuziphatha okungavamile. Lesi simo siyaziwa ngokuthi "isibhedlela sezingane." Uma izimo zenzekile ukuze ungenaso ithuba lokuchitha isikhathi esibhedlela eceleni komntwana, manje kubalulekile ukuthatha izinyathelo zokubuyiselwa ngokushesha ngangokunokwenzeka. Siza ukudlala - umsebenzi oyinhloko wezingane nethuluzi elinamandla lokulungiswa kwengqondo. Ukulahlekelwa yizimo ezihlukahlukene, kuhlanganise nokuhlukumezeka, ingane iveza ukwesaba nokukhathazeka kwayo, okuthuthukisa isimo sakhe. Esigabeni sokuzivikela kwengqondo, kuningi imidlalo ekhethekile yamacala anjalo, abanye babo abazali abangawasebenzisa ekhaya. I-psyche yengane ipulasitiki kakhulu - kungekudala konke kuzokwenza ngcono.
Ukuhlukunyezwa okukhulu kokuzalwa
Izifo ezehlukene ezinsaneni ezisencane
Izinkukhu ezinganeni ezine-fever high
Ama-muffins e-banana emgodini we-microwave
Yiba mnandi: sihlambulula umzimba futhi sinciphise isisindo ngosizo lwetheyi lasekhaya le-detox
Cocktail nge-strawberries ne-basil
Ukupheka ekhaya ngobuciko - amakhowe omisa isobho